လိပ်ဥ ၊ လိပ်သားစားရင် အနာကြီးရောဂါဖြစ်တတ်သလား? – BurmeseHearts
လိပ်ဥ ၊ လိပ်သားစားရင် အနာကြီးရောဂါဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မမှန်ပါ။ လိပ်ဥက ညှီပြီး လိပ်မှာ အကွက်တွေရှိနေတဲ့အတွက် လိပ်ဥ ၊ လိပ်သားစာရင် အနာကြီးရောဂါဖြစ်မယ်လို့ ရှေးမြန်မာတွေ ယူဆခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအယူအဆဟာ မမှန်ဘဲ လိပ်ဥ ၊ လိပ်သားစားတိုင်း အနာကြီးရောဂါမဖြစ်ပါ။ အနာကြီးရောဂါဟာ အနာကြီးရောဂါရစေတဲ့ပိုးကြောင့် ဖြစ်လာတာပါ။ လိပ်ဥ ၊ လိပ်သားစားလို့ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါ။
မြန်မာကြက်ဥနဲ့ မွေးမြူရေးကြက်ဥ ဘယ်ဥက ပိုလို့ အားဖြစ်စေသလဲ?
BurmeseHearts	 May 5, 2020 0
မာနချင်းပြိုင်လို့ အချစ်မှာ အောင်နိုင်မတဲ့လား
Echelon Asia Summit 2017 serves up5Tracks in its sixth year,…
မေတ္တာတရားဖြင့် ချစ်ခြင်းမှသည် သစ္စာတရားဖြင့် ချစ်ခြင်းသို့
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ကလေးမွေးသည့် မြန်မာမိဘများအတွက်
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများ ဘာကြောင့် အိပ်မပျော်ရတယ်?
မိခင်နို့ဟာ ကလေးတွေအတွက် ဘာကြောင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်သလဲ?
သိတဲ့အတိုင်းကျင့်ဖို့ဆိုရင် အစွဲကို အရင်ဖြတ်ပါမှ ဖြစ်မည်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များ ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်?
Down Syndrome ရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်ကို သိရက်နဲ့ လွယ်မွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ရင်…